Terms and Conditions | A bank | Reliable Commercial Bank in Myanmar
A bank eBanking System User Agreement
This user Agreement isacontract entered into by you and A bank eBanking System for the purpose of using the A bank eBanking System. As this agreement has impact on your rights, you are required to read it carefully. Should you wish to know more details, A bank can be contacted for inquiries. Once you have started to use the eBanking System Application of A bank, you agree A bank eBanking Policy and its relevant documents for references. This means you accept the fact that this User Agreement is an agreement made between you and A bank eBanking System according to the law. This agreement is also an agreement you have legally signed.
The Legal Binding between you and A bank eBanking System
Your registration for receiving services shall be deemed as your designation of A bank eBanking as your agent that will, on your behalf, provide as directed by you all kinds of services offered by eBanking System eBanking System including but not limited to the provision of bank services.
1. Tasks to be performed by the user - You need to register with A bank eBanking System Account to obtain services. You can use this service to settle the payments, make book transfers and pay for services though Bank account. You shall accept that whatever process involving use of your password is use of these services. All losses and damages arising from processes involving use of your account and password are your sole responsibility.
2. Registration Information - Upon registration, you need to provide complete, true particulars and facts about the Electronic Devices you will use for these services. Should there be any points that need correction, you must do the corrections immediately. You shall agree to the fact that you do not pretend to be another person by disguising or not use other people's names without seeking permission. If your particulars are found to be inexact, incomplete and untrue, A bank eBanking System services reserves the right to revoke your use of service immediately. Any costs or losses resulting either directly or indirectly from uncertain information are your sole responsibility.
3.Service Charges - You are obliged to pay the agreed, prescribed rates for services offered by A bank eBanking System. In case A bank could not debit transaction fees from the User account, the User cannot perform that transaction.
4.Prohibited Activities - You shall agree not to use your money obtained illegally through A bank eBanking Service. A bank Banking Service cannot be used for whatsoever illegal transactions. If there arise doubtful events which are indicating that you have made or are making illegal, fraudulent activities inclusive of violations of the terms and conditions of this agreement, use of service will be either suspended or revoked. You are obliged to fully co-operate with A bank eBanking System for investigation of skeptical cases.
5.User ID and/or Password
5.1 After the User has obtained Passwords from A bank, the User must change them immediately. It is noted that the system will automatically require that the Passwords be replaced.
5.2 The User shall safeguard User ID and/or Password and must keep it confidential. The disclosure of the User ID and/or Password is prohibited according to the Terms and Conditions. The User agrees to accept the losses or damages, which occur from the disclosure User ID and/or Password or improper usage by himself/ herself.
5.3 In case User ID and/or Password is not recognized/lost/stolen/invalidated, the User should promptly notify the A bank at Tel.(+95-9) 780 227 722.
5.4 Any action performed through User ID and/or Password at that time by the User to which the User agrees, were regarded as his/her taken action and were deemed binding that the User’s electronic signature submitted to the A bank as an evidence of the action through the Service. The User agrees A bank to use the information on his/her action as an original document which used as evidence in proving that the User has taken such action to be used in legal proceeding in all respects. Furthermore, the User agrees and accepts the risk for damages or losses in electronic used whereby the User does not require to sign or to submit any document as an evidence to A bank.
6.Hacking - Should you interfere with, hack or destroy security and service via our Service other them manage your account for payments and receipts or should you attempt to do so, your account can be immediately terminated without any prior notice. Furthermore, your account can be blacklisted and have penalties imposed (inclusive of charges according to the Electronic Law). A bank eBanking System can, without seeking prior permission by you, cautiously reserve the right under this User Agreement to disclose your particulars to anybody who are related to your functions. You have no right to claim compensation for whatsoever damages from A bank eBanking System either either partially or wholly damages resulting from the activities of A bank eBanking System.
7. Account Authorization - Upon registration of bank accounts on A bank eBanking, you shall agree that the registered accounts shall have permissions from the authorizers who have given the rights since applying these bank accounts. If there are any disputes which are concerned with the account authorities, you shall be responsible for any legal actions according to the existing laws of the Republic of the Union of Myanmar.
8. Lawful Age - A bank provides the eService to individual person 18 years of age and over to juristic person.
9. E-mail & Account - The User must have an E-mail address and hold at least one current or savings account with A bank.
10. Giving Correct Data and Information - The User hereby certifies that any of various documents, data, details, which appear and/or which are delivered to A bank whether they are sent in any forms, are accurate and true. The User shall have the rights to use the Service and to makeatransaction under the Service. A bank does not have the responsible to check the correct, accurate, and true of the documents and following details.
11. Changing User Profile and Related information - In case the User intends to change personal information and/or any related details, the User shall request in writing to A bank branches.
12. Changing service conditions - If there are other alterations or amendments on the services' terms and conditions, the User agrees and consents to the Bank the right of such alterations or amendments, as the Bank deemed appropriate.
13. Finding Error and Cancel the Service - If the User finds any error in the eService, or if there is any reason to cancel the Service, the User shall promptly contact A bank at Tel.(+95-9) 780 227 722. After A bank has been notified by the User of the intent to cancel Service, A bank will cancel the Service withinaperiod specified by A bank. The User shall be liable for actions and transactions undertaken prior to the end of such period of cancellation. The User must inform A bank of the date, time, related parties, transaction amount and details, as well as any other information that A bank may request. A bank will investigate and amend any errors (where found) in compliance with governmental and/or the Central Bank of Myanmar regulations. A bank reserves the right to ignore any request that is in contradiction to the rules and regulations of the government and/or the Central Bank of Myanmar.
14. Incident - In case of force majeure or any incidents, which in affect A bank cannot proceed following the Service’s Terms and Conditions, the User allows A bank to proceed as deemed appropriate. The User agrees to cooperate with A bank in any circumstances.
15. Amend Terms and Conditions - If the Bank is obliged by the relevant laws and/or regulations to make further alterations or amendments to the services' terms and conditions, the User agrees and consents to the Bank's alterations or amendments in compliance with such relevant laws and regulations. The User agrees and consents to the Bank the right of suspension and/or termination of the service, at any time, either in full or in part, or the suspension/termination of the service specifically to the User, for which the Bank will provide prior notice.
16. Correspondence, Notice, Letter or Notice - Any correspondence, letter or notice sent by A bank via Postal or E-mail address or Short Message Service (SMS) to registered mobile number, to The User’s specified address shall be deemed to have been duly delivered and shall have been duly acknowledged the content contained therein. The User shall immediately notify A bank in writing via the A bank’s branch.
17. Governing Law & Jurisdiction - This Terms and Conditions shall be governed by and construct in accordance with the laws of the Republic of the Union of Myanmar and the court of Myanmar shall have exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute arising under or in connection with the use of the Service under these Terms and Conditions.
18. Disclose Information - If A bank is required to disclose financial information or transactions related to the use of the Service by any governmental or competent authorities per legal provisions, orders or regulations, the User agrees to allow A bank to disclose such information and/or if requested prepare any report on relevant information and/or financial transactions of the User for submission to those authorities for the benefit of the transaction process/the usage of the Service in Terms and Conditions. The User acknowledges A bank to conduct the User’s financial transaction to those authorities in all respects.
19. Collect, Store and Use Information - The User agrees and consents to the bank to collect and use its information given to the bank, or provided through the bank, or obtain and use information already available to the bank or as the bank received directly or indirectly from other sources, for the purpose of providing services or fulfilling the requested of applicant before providing the services or assigning to third parties in order to support the services, in regard to, including but not limited to information technology, communications, collection and/or any other tasks, assignment of right and/or obligation, legal compliance, risk management, compliance control, internal administration, solving complaint and/or for other purpose necessary to the operation of the bank, or for the bank to provide the services equitably and continuously. The User further agrees and consents to the bank to disclose its information to the bank’s agents, the sub-contractors, co-branding alliances, data processors, auditors, external auditors, credit information company, credit rating agencies, asset management companies, prospective assignees, assignees, legal authorities, and/or any entities, organizations or juristic persons having an agreement with the bank, and also agrees and consents to the aforementioned parties whom receiving information from the bank to collect, use and disclose such information for the same purposes, and to send, and/or transfer the information to be stored in server/cloud.
အီလက်ထရွန်နစ်ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ် (eBanking) အတွက် သုံးစွဲသူ သဘောတူညီချက်
ဤသုံးစွဲသူ သဘောတူညီချက်သည် အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) သုံးစွဲရန်အလို့ငှာ သုံးစွဲသူ (သင်)နှင့် A bank တို့အကြားတွင် ချုပ်ဆိုသည့် သဘော တူညီချက်ဖြစ်သည်။ဤသဘောတူညီချက်သည် သင်၏ ရပိုင်ခွင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရာကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ ၎င်းတွင် ပါရှိချက်များအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက A bank ထံသို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ် (eBanking) ကို စတင်သုံးစွဲသည်နှင့် သင်သည် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော မှီငြမ်းဖွယ်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများအား သဘောတူလိုက်နာမည်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ သင်နှင့် A bank အကြားချုပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ကာ သင်သည် တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်နှင့် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ်ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ် (eBanking) အကြား တရား ဥပဒေ ကြောင်း အရ ခိုင်မြဲစည်းနှောင်ထားသည့်သဘောတူညီချက်
သင်သည် ဤဝန်ဆောင်မှုများရယူရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့် A bank ကို သင်၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရာရောက်သည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) ဖြင့်ပေးအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးပါဝင်ကာ ဘဏ်ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများတည်းသာဟုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိစေရပါ။
၁။ သုံးစွဲသူလုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ - သင်သည် အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) ဝန်ဆောင်မှု များ ရယူနိုင်ရန် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking)အကောင့် တစ်ခုကိုသုံးပြီး စာရင်းပေးသွင်းရမည်။ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီး အခကြေးငွေများ ပေးသွင်းခြင်း၊ ကြိုတင်လက်မှတ်များဝယ်ယူခြင်း၊ဝန်ဆောင်ခငွေပေးချေခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။သင်၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်သော ဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှသည် ဤဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု လက်ခံရမည်။ သင့်အကောင့်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု အားလုံးသည် သင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။
၂။ စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ - စတင်စာရင်းပေးသွင်းချိန်တွင် သင်သည် ဤဝန်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းအသုံးပြုမည့် စက်ကိရိယာများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ အကုန်လုံးကိုတိကျမှန်ကန်စွာပေးသွင်းရမည်။၎င်းအချက်များအနက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်စရာများရှိပါကချက်ခြင်းပြင်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။သင်သည် အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ခြင်း၊ အခွင့်မတောင်းပဲ ထိုသူ၏အမည်ကိုအသုံးပြုခြင်းကို မပြုလုပ်ရန် သဘောတူရမည် ဖြစ်သည်။ သင်ပေးအပ်သည့် အချက်အလက်များသည် မတိကျခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်းများရှိနေပါက A bank သည် သင့်အား A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုခွင့်ကိုချက်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝရှိသည်။ ထိုအချက်အလက်များ မတိကျမှုကြောင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကုန်ကျစားရိတ်နှင့်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအားလုံးသည် သင်၏တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။
၃။ ဝန်ဆောင်ခများ - သုံးစွဲသူသည် သင့်အား A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) က သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုဝန်ဆောင်ခကြေးများကို သဘောတူညီထားသည့် အတိုင်း မဖြစ်မနေ ပေးသွင်း ရမည်။ A bank က သုံးစွဲသူ၏အကောင့်ထဲမှ ဝန်ဆောင်ခ နုတ်ယူ၍မရပါက သုံးစွဲသူသည် ထို အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှုများ ကို ပြုလုပ်၍ရမည်မဟုတ်ပါ။
၄။ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များ - သင်သည် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) ကိုအသုံးပြု၍ တရားမဝင်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ဤသဘောတူညီချက်ပါ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ နှင့်ဆန့်ကျင်၍ တရားမဝင်မရိုးမသား ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများ ပြုလုပ်သည်ဟု သံသယဖြစ်ဖွယ် တွေ့ရှိပါက A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သည်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များအား A bank ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် သင်သည် မဖြစ်မနေ အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၅.၁။ သုံးစွဲသူသည် A bank ထံမှ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များလက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကို ချက်ခြင်းပြောင်းလဲ လိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းစနစ်ကလည်း ထိုသို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကြောင်းတောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။
၅.၂။ သုံးစွဲသူသည် သူ၏သုံးစွဲသူအမှတ်အသားနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ် တို့ကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူအမှတ်အသားနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ် ကိုအခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား ထုတ်ဖော် ပြောကြား သိစေခြင်းကို ဤသဘောတူညီချက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ ထိုသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသိစေခြင်း၊ကိုယ်တိုင်မှားယွင်းစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု အားလုံးသည် သုံးစွဲသူ၏တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
၅.၃။ သုံးစွဲသူအမှတ်အသားနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ် သည် ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီး၊ခိုးယူခံရခြင်း၊အသုံးပြု၍မရခြင်း ၊စစ်ဆေးခံမရခြင်းတို့ဖြစ်ပါက A bank ထံ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်((+95-9)780227722)သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား ရမည်။
၅.၄။ သုံးစွဲသူအမှတ်အသားနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ် ကို သုံးစွဲသူမှသဘောတူခွင့်ပြုထားသော သုံးစွဲသူက ရယူသုံးစွဲ၍ဆောင်ရွက်နေခြင်းဟူသမျှအား သူ/သူ (မ)မှ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဟု သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူ၏ အီလက်ထရွန်နစ်လက်မှတ်သည် A bank သို့ တင်ပြသည့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဘဏ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်မှု၏ သက်သေ ဟု တည်မြဲစေကြောင်း မှတ်ယူမည် ဖြစ်သည်။သုံးစွဲသူသည် သူ/သူမ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ အား တရားဥပဒေအရ စစ်ဆေးစီရင်သည့် ကိစ္စရပ်များအားလုံး တွင် အသုံးပြုနိုင်သောမူရင်းစာမှတ်စာတမ်း များအဖြစ် ဘဏ်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးရန် သဘောတူပါသည်။ မူရင်းစာမှတ်စာတမ်းဆိုသည်မှာ သုံးစွဲသူသည် ဤမည်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြရာတွင် အထာက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုသော စာမှတ်စာတမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူမှ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အထောက်အထားအဖြစ် ဘဏ်သို့ စာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြရန် သော်လည်းကောင်း မလိုအပ်သော အီလက်ထရွန်နစ် နည်းကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ထိခိုက်နစ်နာမှုများ (သို့မဟုတ်) ဆုံးရှုံးမှုများကို သုံးစွဲသူအနေဖြင့် လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၆။ ဟက်ကင်း(ကွန်ပျူတာဖြင့်အချက်အလက်များကိုရယူနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်း) )- သင်၏အကောင့်ကို အခကြေးငွေများပေးသွင်းခြင်း၊ဝန်ဆောင်ခငွေပေးချေခြင်း အတွက်သုံးစွဲသည်မှလွဲ၍ သင်သည် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking)တို့၏ လုံခြုံရေး၊ဝန်ဆောင်မှု တို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသော ဆောင်ရွက်ချက်များလုပ်ဆောင်ပါက၊ သို့တည်းမဟုတ် လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားပါက သင့်အကောင့်အား ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမပြုပဲ အချိန်မရွေး ချက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်မည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် သင့်အကောင့်အား နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရမည့် ဒဏ်ကြေးများတောင်းခံခြင်းတို့ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ A bank သည် သင့်ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများထံ သင်၏အချက်အလက်များအားအသိပေးပိုင်ခွင့်ကို အပြည့်အဝရယူထားမည်ဖြစ်သည်။သင်သည် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking)သုံးစွဲခြင်းကြောင့် တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြစ်စေ၊ အပြည့်အဝဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံခွင့်မရှိပါ။
၇။ ဘဏ်စာရင်း စီမံခန့်ခွဲခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ- A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (eBanking) တွင် ဘဏ်စာရင်းကို မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်လိုက်သော ဘဏ်စာရင်း သည် အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းအား မူလလျှောက်ထားစဉ်ထဲကပင် စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိထားသူများထံမှ ခွင့်ပြုချက်များ ရရှိရမည်ဆိုသည်ကို သင်ကသဘောတူရပါမည်။ ဘဏ်စာရင်း ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရသူများနှင့် အငြင်းပွားမှုများရှိလာပါက ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ဆောင်ရွက်မည့် ဥပဒေကြောင်းဆောင်ရွက်ချက်များ အတွက် သုံးစွဲသူကသာ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
၈။ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်သော အသက်အရွယ် - A bank သည် အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဥပဒေအရဖြစ်တည်နေသောပုဂ္ဂိုလ် (Juristic Person) များအား အီလက်ထရွန်းနစ် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုပေးမည်ဖြစ်သည်။
၉။ အီးမေးလ် နှင့် ဘဏ်စာရင်း - သုံးစွဲသူ သည် အီးမေးလ် လိပ်စာတစ်ခု နှင့် A bank တွင် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း (သို့မဟုတ်) ငွေစုစာရင်း အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရမည်။
၁၀။ မှန်ကန်သောအချက်အလက်များ‌‌ပေးခြင်း - A bank သို့ပြသခြင်း၊ ပေးအပ်ခြင်းတို့ ပြုသည့် အမျိုးမျိုးသော စာမှတ်စာတမ်း များ၊ အချက် အလက်များ၊ အသေးစိတ်အချက်များ အားလုံးသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ပေးပို့သည်ဖြစ်စေ တိကျမှန်ကန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း (အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်) အသုံးပြုသူက တာဝန်ခံ ပါသည်။သုံးစွဲသူ သည် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခွင့်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြု၍ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှုများ ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်။ A bank သည် စာမှတ်စာတမ်းများနှင့် ယင်းတို့ပါအသေးစိတ် အချက်များ၏ မှန်ကန်မှု၊ တိကျမှုနှင့် စစ်မှန်မှုများကို စစ်ဆေးရန် တာဝန်မရှိပါ။
၁၁။ သုံးစွဲသူ အချက်အလက်နှင့် ဆက်စပ်အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း - သုံးစွဲသူ သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားဆက်စပ်အချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲလိုလျှင် A bank ၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် စာဖြင့်ရေးသား၍ ပန်ကြားမှုပြုရမည်။
၁၂။ ၁၂။ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များ ပြောင်းလဲခြင်း - ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များအပေါ် ပြောင်းလဲခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ရှိမည်ဆိုပါက A bank သည် ၎င်းသင့်လျှော်သည်ဟု ထင်သည့်အတိုင်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင် ခြင်းပြုလုပ်ခွင့်ရှိကြောင်း သုံးစွဲသူမှ သဘောတူလက်ခံပါသည်။
၁၃။ ချွတ်ယွင်းမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်ခြင်း - သုံးစွဲသူ သည် အီလက်ထရွန်းနစ် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု တွင် ချွတ်ယွင်းမှုများကို တွေ့ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်ရန် အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ရှိလျှင် ဖြစ်စေ တယ်လီဖုန်းနံပတ် (+95-9)780227722 သို့ခေါ်ဆို၍ A bank သို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်မှုပြုရမည်။ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း A bank အား သုံးစွဲသူ မှ အကြောင်းကြားပြီးနောက် A bank သည် ယင်းသတ်မှတ်ထာသည့်ကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။ပယ်ဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးမီတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များအတွက် သုံးစွဲသူ တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ ဆက်စပ်သူများ၊ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သည့် ပမာဏနှင့် အသေးစိတ်အချက်များအပြင် ဘဏ်မှတောင်းခံသောအခြား အချက်အလက်များကို သုံးစွဲသူ မှ A bank သို့ ပေးရမည်။A bank သည် အစိုးရနှင့်/သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေး မှုများကိုပြုလုပ်၍ ချွတ်ယွင်းချက်များတွေ့ရှိလျှင် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ နှင့်/သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ဆန့်ကျင်နေသော တောင်းဆို ပန်ကြားမှုများကို A bank အနေနှင့် လျစ်လျှူရှု ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၄။ ဖြစ်ရပ်များ - မမျှော်မှန်းနိုင်သောဖြစ်ရပ်များ (သို့မဟုတ်) A bank အနေနှင့် ဝန်ဆောင်မှု စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်များအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက A bank အနေဖြင့် သင့်လျှော်သည်ဟု ထင်သည့်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် သုံးစွဲသူ မှ ခွင့်ပြုပါသည်။ မည်သည့်အခြေအနေ မျိုးတွင်မဆို A bank နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သုံးစွဲသူ က သဘောတူပါသည်။
၁၅။ ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းသတ်ချက်များ - သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နှင့်/သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများအရ ဘဏ် သည် ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိလာသောအခါ အဆိုပါ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဘဏ် မှပြုလုပ် သောပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများကို သုံးစွဲသူ မှသဘောတူလက်ခံပါသည်။ ဘဏ် သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း သုံးစွဲသူ အပေါ် တွင်သာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း/ရပ်စဲခြင်းကို သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သုံးစွဲသူ က လက်ခံသဘောတူပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဘဏ်မှ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။
၁၆။ စာဖြင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကြောင်းကြားခြင်း၊ စာ သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားစာ - A bank သည် စာဖြင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာ (သို့မဟုတ်) အကြောင်းကြားစာများအားလုံးအား သုံးစွဲသူ မှ ပေးထားသောလိပ်စာသို့ စာတိုက်မှသော်လည်းကောင်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့သော်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော သုံးစွဲသူ ၏ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း နံပတ်သို့ စာတို (SMS) ပို့၍သော်လည်းကောင်း ပေးပို့ခြင်းသည် နည်းလမ်းတကျ ပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပြီး သုံးစွဲသူ သည် ယင်းစာတွင်ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို ကျနစွာ သိရှိသဘောတူပြီး ဖြစ်သည်ဟူလည်းမှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူ သည် A bank ၏ ဘဏ်ခွဲမှတဆင့် A bank သို့ စာဖြင့်ရေးသား၍ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
၁၇။ လွှမ်းမိုးသည့်ဥပဒေနှင့်စီရင်ပိုင်ခွင့် - ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံ၏ဥပဒေများကလွှမ်းမိုးပြီး ယင်းဥပဒေများနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရမည်။ ထို့အပြင် ဤစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ အောက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးခြင်းမှ သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုသုံးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍သော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသော အငြင်းပွားမှုများအားလုံးကို စစ်ဆေးစီရင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားရုံးများတွင်သာ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၈။ အချက်အလက်များထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်း - အစိုးရ (သို့မဟုတ်)အခွင့်ရအာဏာပိုင်တစ်စုံတစ်ရာ တို့မှ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ အမိန့်များ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များ ကိုဖြစ်စေ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားရန် A bank သို့ စေခိုင်းလျှင် နှင့်/သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ဘဏ်စနစ် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များမှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကိစ္စရပ်များ အတွက် အဆိုပါအာဏာပိုင်များ ထံသို့ တင်သွင်းရန် သုံးစွဲသူ၏ ဆက်စပ်အချက်အလက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သော အစီရင်ခံစာကို ပြုစုပေးခြင်းအား တောင်းဆိုမှုများရှိလျှင် သုံးစွဲသူ မှ A bank သို့ သဘောတူခွင့်ပြုပါသည်။
၁၉။ အချက်အလက်များ ကောက်ယူ၊သိမ်းဆည်း၊အသုံးပြုခြင်း- ဘဏ် သည်အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် သုံးစွဲသူ မှ ဘဏ်သို့ပေးခဲ့သော (သို့မဟုတ်) ဘဏ်မှတဆင့်ပေးခဲ့သော (သို့မဟုတ်) ဘဏ်သည်ယခင်ထဲက ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော (သို့မဟုတ်) အခြားအရင်းအမြစ်များမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဘဏ်မှရရှိထားသော သုံးစွဲသူ ၏အချက်အလက်များအားအသုံးပြုခြင်းကို သုံးစွဲသူ မှလက်ခံသဘောတူပါသည်။
- ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်။ (သို့မဟုတ်)
- ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများမပေးမီတွင် လျှောက်ထားသူ၏ တောင်းဆိုမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်။ (သို့မဟုတ်)
- သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ၊ အချက်အလက်ကောက်ယူ စုဆောင်းမှုနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို လွှဲအပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ၊ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ညီညွှတ်ခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ၊ ဌာနတွင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ တောင်းဆို တိုင်ကြားမှု ဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာနှင့် အခြားသော ကိစ္စရပ်များအပါဝင်ဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် တတိယပုဂ္ဂိုလ်သို့ လွဲအပ်စေခိုင်းရန်။
- ဘဏ်လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်သောအခြား ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန်။
- ဘဏ်သည်ယင်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို မျှတစွာနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်။
သုံးစွဲသူသည် ယင်း၏အချက်အလက်များကို ဘဏ်က ဘဏ်၏အေးဂျင့်များ၊ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပူးတွဲသုံးသည့်မိတ်ဖက်များ၊ အချက်အလက်စုဆောင်းစီမံသူများ၊ စာရင်းစစ်များ၊ ပြင်ပ စစ်ဆေးသူများ၊ အကြွေးဆိုင်ရာအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲသည့်ကုမ္ပဏီများ၊ ကြွေးဆပ်နိုင်စွမ်းသတ်မှတ် ပေးသည့်ကုမ္ပဏီများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲသည့်ကုမ္ပဏီများ၊ နောင်တွင်လွဲအပ်စေခိုင်းမည့်သူများ၊ လွှဲအပ်စေခိုင်းမည့် သူများ၊ ဥပဒေအရအခွင့်အာဏာရှိသော အာဏာပိုင်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ဘဏ်နှင့်သဘောတူညီမှုပြုလုပ်ထားသည့် သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ်) ဥပဒေအရ ဖြစ်တည်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်းအား သဘောတူခွင့်ပြုပါသည်။ ထို့အပြင် ဘဏ်မှအချက်အလက်များကို ရရှိခဲ့သည့် အထက်တွင်ဆိုခဲ့ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များက အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အဆိုပါအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်းတို့ကိုသော်လည်းကောင်း ကလောက်/ဆာဗာ များပေါ်တွင် ထိုအချက်အလက်များအား သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ယင်းတို့ကို ပေးပို့ခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကိုသော် လည်းကောင်း သုံးစွဲသူ မှ လက်ခံသဘောတူပါသည်။